မေလ 2015 - စာမျက်နှာ 8 - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » 2015 » မေ (စာမျက်နှာ 8)
လစဉ်မော်ကွန်း: မေလ 2015
T2 ကွန်ပျူတာနှင့်သဟဇာတသီးသန့်သဟဇာတ MEDIAGRID စမ်းကြည့်ရန်တက်ရောက်ရန် NEW YORK Creative ဖိတ်ခေါ်
T2 ကွန်ပျူတာ, Inc, ကွန်ပျူတာ, သိမ်းဆည်းခြင်း, ကွန်ယက်နှင့်မီဒီယာဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲနောက်ဆုံးပေါ်ထောက်ပံ့ထားတဲ့အိုင်တီဖြေရှင်းချက်ကုမ္ပဏီနှင့်သဟဇာတ, ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်အားရင်းနှီးခင်မင်စွာHarmonic®တစ်ခုသီးသန့် preview ကိုမှစိတ်ဝင်စားနယူးယောက်ဖန်တီးမှုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုဖိတ်ခေါ် MediaGrid, မဿဲ Rehrer, ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာကဦးဆောင်ကာ Ethernet-based က Shared-သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်, သဟဇာတ။ အဆိုပါဖြစ်ရပ် 119 မှာကျင်းပပါလိမ့်မည် ...
VITEC လွှမီဒီယာအရှေ့ကုန်စည်ပြပွဲကို Preview
Booth 113 မေလ 12-13 နယူးယောက်ဟီလ်တန် Midtown "ဒီ VITEC ထုတ်ကုန် lineup ဒီနေ့ရဲ့ streaming များ setting များပိုမိုထိရောက်မှု, အရည်အသွေး, နှင့်မှီခိုကိုရောက်စေဖို့နေရာချထားခဲ့သည်။ လွှမီဒီယာအရှေ့မှာကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ကျယ်ပြန့်ခရီးဆောင် encoding က၏အကွာအဝေး, IPTV များနှင့်ဒီကုဒ်ဒါဖြေရှင်းချက်သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် - အရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာစီးဆင်းရန်ရှာကြံမည်သည့် application ကိုမှကြွယ်ဝသောမီဒီယာ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောပို့ဆောင်မှုအားဖွင့်။ ...
Adorama ကနေသီးသန့် US မှာအခုဆိုရင်ရှိနိုင် KIPON မှန်ဘီလူး adapter
နယူးယောက်, နယူးယော့ - မေလ 5, 2015 - Adorama, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယို, ပုံရိပ်နှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၏တဦးတည်းပဲတရားဝင်သီးသန့်နယူးယောက်အခြေစိုက်လက်လီအရောင်းဆိုင်အောင်, ကမ္ဘာကျော်ကင်မရာ adapter ထုတ်လုပ်သူ KIPON နဲ့သဘောတူညီမှုလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး ယခု Adorama က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှ KIPON products.Available များအတွက်အမေရိကန်ထွက်ပေါက်, ဖောက်သည်များပိုမိုထက် 400 မျိုးပေါင်းမှတဆင့် browse နိုင်ပါတယ် ...
CNN ကထုတ်လွှင့် Global Xpress မှတဆင့် HD မှာနီပေါငလျင်လွှမ်းခြုံ Live
ခတ္တမန္ဒူ, နီပေါ,5မေလ, 2015 - CNN က Inmarsat ရဲ့အသစ် Ka-band ကိုဂြိုဟ်တုကွန်ရက်ကို Global Xpress® ( "ကုမ္ပဏီမှ GX") ကနေတဆင့် On-လေကြောင်းတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှူးထုတ်လွှင့်။ မိတ်ဖက်ကွန်ယက်တီထွင်နှင့် တွဲဖက်. မှာထုတ်လွှင့်က CNN ၏ 4nd မေလတနင်္ဂနွေသတင်းလွှမ်းခြုံများအတွက်ခတ္တမန္ဒူကနေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာXpress®ဂြိုဟ်တုဘရော့ဘန်းကွန်ယက်ကိုမှတဆင့် HD ကိုတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုနီးပါး 2Mbps အောင်မြင်ရန်နိုင်ခဲ့တယ် ...
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစာတမ်းဖတ်ပွဲဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းများ၏ဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းမှပတ်သ က်. ၏အရောင်းသွက်ရှိမယ်မိုမာမှပြန်လည်ရောက်ရှိ
Los Angeles, CA - အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစာတမ်းဖတ်ပွဲ (Das) ကမေလ 8, 2015 အပေါ်မော်ဒန်အနုပညာနယူးယောက်ရဲ့ပြတိုက်မှပြန်လည်ရောက်ရှိ။ Das အနုပညာ, မီဒီယာ & ဖျော်ဖြေရေး, တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်သိပ္ပံများတွင်အလုပ်မှာနေသောဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ array ထဲကနေတင်ပြချက်များ, ဆွေးနွေးချက်များနှင့်မတူညီအမြင်များတစ်ဦးအပြည့်အဝနေ့ကပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်အရာကိုဆိတ်ကွယ်ရာ Das သတ်မှတ်၎င်း၏အာရုံဖြစ်ပါတယ် ...
ဝါရင့် Re-မှတ်တမ်းတင်ရောနှောကီဗင် O'Connell Sony Pictures မှနေအိမ် Comes
CULVER CITY, CALIF. -ဝါရင့် Re-မှတ်တမ်းတင်ရောနှောကီဗင် O'Connell Sony Pictures Post ကိုထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများပေးရန်ပြန်ရောက်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးက 20 အချိန်အကယ်ဒမီဆုရဆန်ခါတင်, O'Connell ပြီးသား, Sony ကမှာ Boy Next Door အ, ကိုယ်ပိုင် / လျော့နည်းမကောင်းသောအကျင့်များနှင့်အသံစုံလငျ2လေးစီမံကိန်းများပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ သူကပုလဲဆိပ်ကမ်း, Spider-Man, Spider-Man 1993, ကိုယျတှေ့မှတျတမျးမြားအပါအဝငျခရက်ဒစ်နှင့်အတူ 2008 ထံမှ2ရန်စတူဒီယိုမှာဝန်ထမ်းများအပေါ်ယခင်ကခဲ့ ...
East Coast Market ကသို့က SIM Group မှတိုးချဲ့န်ဆောင်မှုများ
SIM ကဒ် Los Angeles-အဆိုပါ SIM ကဒ် Group မှ, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းမှ Post-ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသို့၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုချဲ့ထွင်ကိုကြေညာနယူးယောက်ဈေးကွက်သို့ချဲ့ထွင်ရန် Bling ဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲ့ High-end လုပ်ငန်းအသွားအလာန်ဆောင်မှုအပေါ် Capitalizes နယူးယောက်နေ့စဉ်သတင်းစာများနဲ့ off-line နှင့်ပြီးသည်။ ဘရွတ်ခ်လင်းစက်ရုံ - လက်ရှိ DaVinci ရတာဟာအရာ ...
Mediaproxy မြေပြင် Breaking 21 Input, HD-SDI ပလက်ဖောင်းအစွမ်းထက်ကုန်ကျစရိတ်ချွေ 2RU ဆာဗာကြေညာ
Mediaproxy Pty ။ , Ltd. , ထုတ်လွှင့်လိုက်နာမှုသစ်ထုတ်လုပ်ရေး, content တွေကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင် 2RU ပုံစံအချက်အတွက်၎င်း၏အသစ်က High-density ကို HD ကို-SDI server ကိုပလက်ဖောင်းကိုမိတ်ဆက်။ အသစ်အလွန်အမင်းပါဝါထိရောက်ပလက်ဖောင်းအားလုံး HD ကို-SDI အခြေစိုက် LogServer စနစ်များများအတွက်မကြုံစဖူးအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုပေးထားပါတယ်။ 21 baseband သွင်းအားစု၏တစ်ဦးကစုစုပေါင်းယခုအကြီးအကျယ်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချ, တစ်ခုတည်း 2RU LogServer ပလက်ဖောင်းအတွက်ထောက်ခံနေကြသည် ...
ရောနှော / မှတ်တမ်းများအသံဖုန်းများအတွက် 6-စီးရီးဝါရင့် Expeditionary အသံရောနှောနှင့်အတူ Extreme Weathers
Nashville, TN, မေ 5, 2015 - ဝါရင့်အသံရောနှောခရစ္စတိုဖာဘရောင်းကြမ်းတမ်းဒြပ်စင်ကြားမှအသံဖမ်းဆီးဖို့တဦးတည်းအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူမတ်စောက်သောကမ်းပါးရဲ့အစွန်းပေါ်မှာမိမိကိုမိမိတွေ့သောအခါသူရောနှော / မှတ်တမ်းများအသံဖုန်းများအတွက်လိုင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အတွေ့အကြုံထက်ပို 23 နှစ်ပေါင်းနှင့်အတူ, သူသည်ထိုကဲ့သို့သောပါပူဝါနယူးဂီနီ၏တောအဖြစ်အများအပြားဝေးလံခေါင်သီသောနေရာများမှခရီးထွက်ခဲ့ပါသည် ...
Scale ကိုထွက် 4K + ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာ - ကကဒီမှာဖွင့်, သငျသညျအဆင်သင့်ရှိသနည်း ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်တံခါးကိုအပေါ်စကားကိုနားထောငျခေါအခွင့်အလမ်းသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အဆိုပါပစ္စည်းစတိုးဆိုင်မှာကြီးမားတဲ့ဖန်သားပြင် perusing နေစဉ်, ဘထွေး Bernie မှတ်ချက်များ "ဒီရုပ်ပုံလွှာ, ကြီးသောကြည့်" "ဒါပေမယ့်လာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းသူတို့စူပါ UHD ရှိသည်လိမ့်မယ်, သို့ဖြစ်လျှင်ဤတီဗီပေါရာဏဖြစ်ပါတယ်!" သူများသည်မှတ်ချက်များကိုအဆိုးဝါးဆုံးပြဿနာများ၏အချို့ကိုယ်စားပြု ... တောင်းပန်ပါတယ်, အခွင့်အလမ်းများ ယနေ့အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုစက်မှုလုပ်ငန်းရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ သင်ဘယ်လို, ဆည်းပူး post ကိုများနှင့်သင့်လျော်သောအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့နည်းလမ်းနှင့်အတူမကယ်မလွှတ်ကြဘူး ...
အင်ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သူများ Aja CION နှင့်အတူ "မဟာအမေရိကန်ရုပ်ရှင် Hustle" ကိုရုပ်ရှင်ရုံမျှော်ယူခဲ့
သူတို့အနေနဲ့မော်ကွန်းရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်အောင်အကြောင်းကိုတစ်မော်ကွန်းရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားအဖြစ်လာမည့် Indie feature ကို "မဟာအမေရိကန်ရုပ်ရှင် Hustle" ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာမိုက်ကယ် Anton နှင့်သရုပ်ဆောင်မိုက်ကယ် Monsour အောက်ပါအတိုင်း။ လမ်းတစ်လျှောက်, ထိုနှစ်လုံးကိုတော်တော်များများပွေီးမှရင်ဆိုင်နှင့်မှန်ဘုံထုတ်လုပ်မှုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးယနေ့ရင်ဆိုင်ရစိန်ခေါ်ကြောင်းပြန်သွားလေ၏။ Wonder Lab မှရုပ်ရှင်ကထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်မိုက်ကယ် Anton သည်အားဖြင့်ညွှန်ကြားထား ...
ဂျပန်၏ထိပ်တန်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးလိဂ်တစ်ခုလုံး 2015 ရာသီများအတွက် ChyronHego TRACAB Player ကိုခြေရာကောက် System ကိုထည့်သွင်း
မေလ 4, 2015 - - ChyronHego ယနေ့သော J.League, ဂျပန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးလိဂ်ရဲ့ထိပ်ဌာနခွဲထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ChyronHego ရဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ-စီးနည်းပညာ up-to-The-ဒုတိယအအဖွဲ့အားသုံးသပ်ခြင်းများအတွက် Player ကိုခြေရာကောက်ဒေတာနှင့်ဝါသနာရှင်ပျော်မွေ့ MELVILLE, နယူးယော့ဘဝမှကယျတငျ အားလုံး 18 J.League အဖွဲ့များနှင့်နေရာများများအတွက်အဆင့်မြင့်ကစားသမားခြေရာခံခြင်းစွမ်းရည်များကိုရန် ChyronHego TRACAB (TM) စနစ်အထဲကရှင်းပြီသိရသည်။ TRACAB ပိုပြီးလွှမ်းမိုးလိမ့်မည် ...
အသံလွှင့်အာရှ 2015 မှာ Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းကိရိယာပျေါလှငျရိုက်ကူးရေးနှင့်အသံလွှင့် Market ကဖြေရှင်းနည်း
Marina Bay Sands, စင်္ကာပူ, မေ 4, 2015-Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းကိရိယာ, ကင်မရာထောက်ခံမှုဖြေရှင်းချက်တီထွင်ဆန်းသစ်၏ထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, များအတွက်သင့်လျော်သောသစ်ကို Cineline 70 tripod စနစ်နှင့်ကြံ့ခိုင် Air ကို tripod စနစ်အပါအဝင် tripod စနစ်များ, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအုပ်စုတစ်စုကိုရည်ညွှန်းပြသ အသံလွှင့်အာရှ 2015 (5L6-05 ရပ်) မှာပလီကေးရှင်းတစ်ခုခင်းကျင်း။ သည့်အခါပထမဦးဆုံးအကြှနျုပျတို့သညျ "ကျနော်တို့အနေနဲ့ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံရရှိ ...
တီဗီထုတ်လုပ်မှုအတွက် audio ကွန်ယက်အဖွဲ့: ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ရှေ့တော်၌ကဤသုံးပြီးခဲ့ပြီမဟုတ်လော
IT နှင့်ထုတ်လွှင့်ဆုံတစ်ဦးကိုချက်ချင်းတီဗီစက်ရုံ၏လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများအနှံ့ရွေ့လျားဗွီဒီယိုနဲ့အသံအချက်ပြ၏ဗြာဒိတျရူပါရုံခေါ်တော်မူ၏။ အဆောက်အဦး၏တစ်ဦးကလျင်မြန်စွာမြင့်တက်အရေအတွက်ကထိထိရောက်ရောက်ကေဘယ်လ်ကြိုးများနှင့်ဆက်သွယ်မှုများနိမ့်ဆုံးနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုခန်း, ထုတ်လုပ်မှုနေရာများနှင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းများအကြား Multichannel အချက်ပြမှုများကို routing, အိုင်ပီကွန်ယက်ကျော်အသံဖိုင်မှသက်သက်သာ baseband ဖြန့်ဖြူးခြင်းမှဖက်ပြောင်းနေကြသည်။ တန္ဖိုး ...
ယနေ့ထုတ်လွှင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေတစ်ခုမှာနည်းပါးလာအရင်းအမြစ်များကိုပိုမိုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်နှင့် Air-သို့မဟုတ်အွန်လိုင်း-ပိုမြန်ပေါ်မှာရရန်အဲဒါကဖိအားဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့သိသာအလွှာထည့်သွင်းခြင်း, စက်မှုလုပ်ငန်းများအခြေခံနည်းပညာပိုင်းလာမှုကိုထောက်ပံ့လျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေတဲ့သောအခါတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပျက်နေသည်။ အတော်များများကထုတ်လွှင့်နေပြီအကူးအပြောင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်စတင်ပါပြီ ...
Ikan - သင်နိုင်သလား!
Ikan တကယ်ဆွဲ-ထဲက 2015 NAB ပြရန်အားလုံးကိုမှတ်တိုင်များ။ ယခုနှစ်ပြပွဲတွေဟာလည်းပုပြီးသားအထင်ကြီး Ikan ထုတ်ကုန်လိုင်းများသို့အသစ်သောအသက်တာကိုမှုတ်။ ဒါကြောင့်အသစ်ကဘာလဲ သငျသညျမေးရန်နာမယူဘဲနေစေခြင်းငှါ။ ကောင်းပြီ ... စောင့်ကြည့်? စစ်ဆေးပါ။ တူးစင်? ကြောင်းတယ်။ Teleprompters? အဆင်ပြေလား။ အလင်းအိမ် LED? Yup, သငျသညျကိုတောင်မေးရန်မလိုအပ်ခဲ့တာလဲ Ikan ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ကျယ်ပြန့်အေိမျမြားကြောင့်လိုအပ်ပါတယ်သယ်ဆောင် ...
8 ၏စာမျက်နှာ 8«ပထမဦးစွာ...«45678